ခရီးဆောင်ကျန်းမာရေးပစ္စည်းနေ့လည်စာ Box ကို
အရောင် Beige 1 စိမ်းလန်းသော ပန်းရောင် 1 စိမ်းလန်းသော နေ့လည်စာသေတ္တာ 3pcs အီး SET : D SET ကို C SET F SET ခ SET တစ်စုံ အိုး 3pcs အဝါနုရောင်ရှိသော ပန်းရောင် BEIGE B ဘူးခွံ 3pcs အပြာရောင်ခ ပန်းရောင် B ကို
Beige 1 စိမ်းလန်းသော ပန်းရောင် 1 စိမ်းလန်းသော နေ့လည်စာသေတ္တာ 3pcs အီး SET : D SET ကို C SET F SET ခ SET တစ်စုံ အိုး 3pcs အဝါနုရောင်ရှိသော ပန်းရောင် BEIGE B ဘူးခွံ 3pcs အပြာရောင်ခ ပန်းရောင် B ကို
အိတ်ဆောင်ကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောနေ့လည်စာ - Beige 1 backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
feature ကို: မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ဇွန်းသို့မဟုတ် Chopsticks နှင့်အတူယိုစိမ့်မှု, Eco-Friendly
ပစ္စည်း: PP + ပစ္စည်း AS
အရောင်: အဝါနုရောင်၊ ပန်းရောင်၊ အစိမ်းရောင်
ပုံစံ: ဂျပန်, ရင်ပြင်
ကုန်ပစ္စည်းအပူခံနိုင်ရည်: -20 ° C -140 ° C ဖြစ်သည်
အသုံးပြုမှု - ကျောင်းနေ့လည်စာ၊ ပျော်ပွဲစားစားပွဲ၊ စခန်းချခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးများအတွက်အပူချိန်မြင့်မားခြင်း၊ ရေခဲသေတ္တာအအေးခန်းများ၊
ရွေးစရာက - 1x နေ့လည်စာသေတ္တာ၊ ၁ x ဇွန်း၊ ၁ x ဖရက်၊ 1xlunch သေတ္တာအိတ်
Option B: ၁xx ၆၀၀ မီလီမီတာဟင်းချိုခွက်
ရွေးစရာ C: ၁x ပတ်ပတ်လည်ဟင်းချိုပုလင်း ၁၀၀၊ ဇွန်း ၁ ခ
Суперланчбокс။ Онполностьюоправдалмоиожидания။ Легкий, удобныезастежки, вместительный, безопасныйматериал (пп 5) ။ လက်ဆောင်များထဲတွင်လက်ဆောင်များကိုအခြားကားများဖြင့်တင်ထားသည်။ однозначнорекомендую!
အလွန်တိကျသည်! ငါကချစ်ကြပြီးချက်ချင်းစတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်တော်အကြံပြုသည်မှာ!